10 Amathuluzi Okubhala Okuqukethwe Okumangazayo Wokumaketha Okumangalisayo | Martech Zone
Kunzima ukuthola amagama afanele okuchaza amandla nokuba khona kwakho konke ekubhalweni kokuqukethwe. Wonke umuntu udinga okuqukethwe kwekhwalithi kulezi zinsuku - kusuka kuma-blogger amateur kuya ezinkampanini zomhlaba jikelele ezizama ukukhuthaza imikhiqizo nezinsizakalo zabo.
Ngokombiko, izinkampani ezibloga zithola Izixhumanisi ezingama-97% ngaphezulu kumawebhusayithi abo kunabalingani babo abangabhulogi. Olunye ucwaningo lwembula ukuthi ukufaka ibhulogi njengengxenye eyinhloko yewebhusayithi yakho kuzokunikeza ithuba elingcono lokuba yi-434% zibalwa kakhulu ezinjinini zokusesha.
Kepha ukuze ube ngumbhali ophumelelayo, udinga ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza zobuciko nama-plugins. Abasizi bedijithali bangakusiza ukuthi uthuthukise ukubhala kwakho, ngakho-ke qhubeka ufunda ukuze uhlole amathuluzi wokubhala wokuqukethwe ayi-10 amahle wokumaketha okumangazayo.
1. Blog Isihloko Generator
Ukuthola umqondo omusha wokuqukethwe akulula uma kufanele ushicilele okuthunyelwe masonto onke noma nsuku zonke. Yingakho ke I-Hubspot thuthukisa i-Blog Topic Generator ukusiza ababhali ekutholeni isihloko esifanele amasayithi abo. Inqubo ilula kakhulu: faka igama elingukhiye bese ithuluzi lizokukhombisa imibono eminingana.
Isibonelo, singenile marketing futhi ngathola iziphakamiso ezilandelayo:
Ukumaketha: Okulindelekile kuqhathaniswa neQiniso
Ngabe ukumaketha kuyoke kubuse umhlaba?
Into enkulu elandelayo ekumaketheni
Ukumaketha kuchazwe ngezinhlamvu ezingaphansi kuka-140
I-Hubspot Blog Topic Generator I-FATJOE Blog Topic Generator
I-2. Ithuluzi elingukhiye
Uma ufuna ukubona ukuthi izinto zisebenza kanjani ngaphandle kwesihleli segama elingukhiye le-Google, sincoma ukuthi uhlole leli thuluzi elingukhiye. Ipulatifomu iyakwazi ukukhiqiza iziphakamiso zamagama angukhiye angaphezu kwe-700 ngegama ngalinye lokusesha.
Leli thuluzi alikubuzi nokuthi udale i-akhawunti ekhethekile, ngakho-ke ungalisebenzisa mahhala ngokuphelele kaningi ngangokunokwenzeka. Ongakulindela kuThuluzi Lamagama Asemqoka ukukhomba ngokushesha ukusesha okuvame kakhulu kwe-Google bese uthola amagama angukhiye ahambisana kahle nezidingo zezithameli zakho.
Nansi enye yezintandokazi zethu, iCoffitivity. Le ngxenyekazi yenzelwe nonke imimoya yamahhala ngaphandle lapho enijabulela ukusebenza ngaphandle kwehhovisi kepha eningakwazi ukuyikhokhela. I-Coffitivity ibuyisela kabusha imisindo ye-cafe ukukhulisa ubuhlakani bakho futhi ikusize usebenze kangcono.
Inikeza imisindo ehlukahlukene ehlukahlukene, kusukela ekububuleni kwasekuseni naseCafé de Paris kuya ezindaweni zokuphumula zesikhathi sasemini naseBrazil bistros. Ukuzikhukhumeza kukunikeza umuzwa wokusebenza endaweni ethokomele futhi epholile, okuyisikhuthazo sangempela kubalobi abaningi.
4. Hlala Ugxile
Ukuhlehlisa izinto kungumbulali womkhiqizo, kepha kunezindlela zokubhekana nale nkinga, futhi. I-Stay Focusd inyusa umkhiqizo wakho ngokunciphisa isikhathi ongasisebenzisa kumawebhusayithi achitha isikhathi. Isebenza kanjani?
I-plugin ilinganisa isikhathi osichitha ku-inthanethi futhi ivimba zonke izici ngokushesha lapho isikhathi esabiwe sisetshenzisiwe. Iphoqa abakuhlehlisela ukugxila emisebenzini yabo futhi ibasize bafeze imisebenzi nezinjongo zansuku zonke. Sibonga esidlangalaleni esisebenza nabo ku Umhlaba Wokubhala I-Essay ngokusethula kuleli thuluzi elimangalisayo!
I-5. Amazwi we-750
Cishe ababhali abayizinkulungwane ezingama-500 emhlabeni wonke basebenzisa amagama angama-750 njengomsizi obalulekile wokubhala. Leli thuluzi lenziwa ngenhloso eyodwa kuphela - ukusiza ama-blogger amukele umkhuba wokubhala nsuku zonke. Njengoba igama lalo liphakamisa, isiza sikhuthaza abadali bokuqukethwe ukuthi babhale okungenani amagama angama-750 (noma amakhasi amathathu) usuku ngalunye. Akunandaba ukuthi ubhala ngani inqobo nje uma ukwenza njalo. Umgomo ucacile: ukubhala kwansuku zonke kuzokuza kuwe ngokuzenzekelayo ngemuva kwesikhashana.
6. Rush Indatshana Yami
Ukubhala okuthunyelwe kwebhulogi kunzima, kepha ukubhala izindatshana ezisezingeni eliphakeme kuyinselele enkulu. Kungakho abanye ababhali besebenzisa iRushmyessay, i-ejensi esebenzisa inqwaba yababhali abanolwazi kuyo yonke imikhakha yobungcweti.
UCraig Fowler, ozifunela ikhanda ku Imisebenzi yase-UK Ukulekelela, uthi uRushmyessay uqasha kakhulu abantu abaneziqu ze-Master noma ze-PhD abaqinisekisa ukulethwa okusheshayo nekhwalithi ephezulu. Okuhlaba umxhwele nakakhulu ukuthi iRushmyessay inikeza amaklayenti ukwesekwa kwamakhasimende angama-24/7, ukuze ukwazi ukuthumela umlayezo noma ubashayele noma nini lapho ufuna khona.
Rush Indatshana Yami
7. Inkawu Yocwaningo
Okuthunyelwe okuhle kakhulu kuyajabulisa futhi kuyaheha, ngakho-ke kukhuthaza abasebenzisi ukuthi bathathe izinyathelo ngokubuza imibuzo noma ngokushiya imibono. Uma ufuna ukwenza ama-athikili asebenzisane kakhudlwana, kufanele usebenzise iSurvey Monkey. Umklami wenhlolovo olula okuvumela ukuthi uqambe futhi ushicilele izinhlolovo zemibono eku-inthanethi kungakapheli imizuzu. Ngaleyo ndlela, ungavumela abalandeli bakho banqume okubalulekile futhi bakusebenzise njengomthombo wokhuthazo kokuthunyelwe kwebhulogi okuzayo.
Ukushicilela izindatshana ngaphandle kokuhlela akuwona neze umqondo omuhle. Kufanele uhlole yonke ingxenye encane yombhalo ukuze uqiniseke ukuthi awekho amaphutha esipelingi noma wohlelo lolimi. Kodwa-ke, lokhu kungaba ngumsebenzi owesabekayo uma ufuna ukukwenza ngesandla, ngakho-ke siphakamisa ukuthi usebenzise Grammarly. I-plugin ethandwayo yokufunda amaphutha ingabheka konke okuthunyelwe ngemizuzwana bese igqamisa amaphutha, umbhalo oyindida, neminye imininingwane eminingi eyenza okuqukethwe kwakho kungaphelele.
9. Abavukuzi beGrgrade
Uma ungafuni umshini wokuhlola okuthunyelwe kwakho, kunesinye isixazululo esilula. Iza ngesimo se-GgradeMiners, i-ejensi yokubhala nokuhlela enabahleli abaningi abanekhono. Udinga nje ukubashayela ucingo futhi bazokunikeza umphathi we-akhawunti ngokushesha ozothatha leli cala. Usebenzisa le nsizakalo, ungalindela okungaphansi kokuhlela ukuphelela nokuhlakanipha kwesitayela.
Ithuluzi lokugcina ohlwini lwethu nakanjani lingenye yezinto ezithakazelisa kakhulu. I-Cliché Finder isiza ababhali ukupholisha okuqukethwe kwabo ngokukhomba nokugqamisa amagama noma amabinzana asetshenziswe ngokweqile. Iningi labantu alinaki le nkinga, kepha uzomangala ukubona ukuthi mangaki ama-clichés akhona ekubhalweni online. Njengombhali ozimisele, awufuni ukuvumela lokhu ukuthi kwenzeke nakuwe, ngakho-ke sebenzisa i-Cliché Finder ukuqeda usongo.
Ama-blogger amahle kakhulu awagcini ngokuhlakanipha nokudala kepha futhi ayaphumelela ekusebenziseni izinhlelo zokusebenza zokubhala eziku-inthanethi nama-plugins. Lokhu kusiza ababhali ukubhala ngokushesha futhi benze ama-athikili angcono isonto nesonto, okuyisisekelo esiyisisekelo sokuba umklami wokuqukethwe osezingeni eliphezulu.
Sikukhombise uhlu lwamathuluzi wokubhala wokuqukethwe ayi-10 angakusiza ukuthuthukisa imisebenzi yakho yokumaketha. Qiniseka ukuthi uyabahlola futhi ubhale amazwana uma unezinye iziphakamiso ezithokozisayo ongabelana nathi ngazo!
Ukudalula: Martech Zone isebenzisa isixhumanisi sayo sokuhambisana ne-Grammarly kule ndatshana.
Tags: i-generator yesihloko sebhulogiukuqothukaphuthuma indaba yamiamathuluzi okubhala